Kubhururuka nekuzvikudza: United Airlines, Chase uye Visa rutsigiro LGBTQ + kuenzana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Kubhururuka nekuzvikudza: United Airlines, Chase uye Visa rutsigiro LGBTQ + kuenzana
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Inokodzera United MileagePlus Visa Cardmember vanowana mashanu mamaira mamaira emadhora ese akapihwa kumasangano anobatsira LGBTQ + nharaunda - inosvika kumadhora chiuru pakadhi rakakodzera.
Iyo Trevor Project: Sangano repasi rose rekudzivirira kuzviuraya uye sangano rekupindira kwedambudziko reLGBTQ + vechidiki
Human Rights Campaign: Sangano rinoshanda kugadzira nyika umo vanhu veLBBTQ + vanovimbiswa kuenzana uye vanogamuchirwa senhengo dzakazara dzenzanga kumba, kubasa uye munharaunda dzese.
StartOut: Isiri-purofiti ine chinangwa chekuwedzera huwandu, mutsauko uye kukanganisa kweve LGBTQ + vanamuzvinabhizimusi uye kusimudzira nyaya dzavo kutyaira kusimudzira hupfumi munharaunda.
Mukupemberera nekusigirwa kweMwedzi Wekuzvikudza, United Airlines, dzingirira uye vhiza vari kubatana kuti vape muUnited Visa Cardmember avo vanopa kune asiri-purofiti LGBTQ + masangano. Pakati paJune 1 naJune 30, 2021, vanokodzera United MileagePlus Visa Cardmember vanogashira mamaira mashanu madhora emadhora ese kusvika pamadhora chiuru muzvipo pakadhi rakakodzera rakaitwa kumasangano anotevera:
The Trevor Project: Sangano repasi rose rekuzvidzivirira uye sangano rekupindira kwedambudziko reLGBTQ + vechidiki.
Mushandirapamwe Wekodzero Dzevanhu: Sangano rinoshanda kugadzira nyika umo LGBTQ + vanhu vanovimbiswa kuenzana uye vanogamuchirwa senhengo dzizere dzenzanga kumba, kubasa uye munharaunda dzese.
KutangaOut: Iyo isiri-purofiti ine chinangwa chekuwedzera huwandu, mutsauko uye kukanganisa kweve LGBTQ + vezvemabhizimusi uye kusimudzira nyaya dzavo kutyaira kusimudzira hupfumi munharaunda.
"Mwedzi uno weKudada, United iri kupemberera basa redu regore rose rekutsigira uye kutsigira vashandi vedu nevatengi veLGBTQ + nekuvhenekesa masangano anogovera kuzvipira kwedu mukusimudzira nharaunda yeLBBTQ," akadaro Suzi Cabo, director director weUnited, musangano wepasirese wemagariro. "Tinodada kudyidzana naChase neVisa kupa avo vanokoshesa United Visa Cardmember mukana wakakosha wekudzorera uye kuwana mibairo kubva kwatiri nemipiro yavo."
Vatengi vanogashira mashanu akazara mamaira nedhora rakapihwa kubva kumakadhi anotevera: United GatewaySM Visa Kadhi, UnitedSM Ongororo Visa Kadhi, United KutsvagaSM Visa Kadhi, United ClubSM Asingagumi Visa Kadhi, United ClubSM Visa Kadhi, UnitedSM Bhizinesi Visa Kadhi uye United ClubSM Bhizinesi Visa.
United ine kuzvipira kuri kuenderera mberi kuGBBTQ + kuenzana iyo inosanganisira nhoroondo inodada yekutanga. United yaive yekutanga ndege yeUS kunyatsoziva kudyidzana kwepamba mu1999 uye yekutanga ndege yeUS kupa zvisirizvo-zvebhinari sarudzo dzese munzira dzayo dzese dzekubhuka. United zvakare yaive yekutanga kambani yeruzhinji kupinzwa muchirongwa chePride Live's Stonewall Ambassador mukucherechedza kuzvipira kwendege kuLGBTQ + kuenzana muna 2019. Kuburikidza neEQUAL, ndege yendege yeLBBTQ + Bhizinesi Resource Group, nhengo dzinopfuura zviuru zviviri nemazana maviri dzinoshanda pamwechete kutsigira vakamirira LGBTQ + nharaunda, kushanda nenhengo uye vatungamiriri kambani yose kugadzira nzira dzekuendesa zviwanikwa, dzidzo uye kukurudzira.
"Kuchengeta Mwedzi Wekuzvikudza, taida kupa mubayiro kumakadhi vanopa kumasangano anoshandira nekumiririra vashandi vedu veLBGT, vashandi vemakadhi nemhuri dzavo: The Trevor Project, The Human Rights Campaign, uye StartOut," akadaro Brad Baumoel, mukuru wepasi rose weLBBT + Nyaya dzeJPMorgan Chase. "Tinofara kujoina Visa neUnited kuti vape mamaira ezvipo zvinotsigira nharaunda yeLBGT."
"Visa inotenda hupfumi hunosanganisira munhu wese, kwese kunosimudzira munhu wese, kwese kwese," akadaro Kirk Stuart, mutevedzeri mutevedzeri wemutungamiri uye mukuru weNorth America mutengesi wekutengesa nekutenga kuVisa. "Takazvipira kushandisa simba renetiweki yedu kutsigira nharaunda yeLBBTQ + nevamwe vanhu vakasiyana mukupora kwavo kubva padenda repasi rose nekupfuura." Kutyaira kurovera kuburikidza nehukama hwekudyidzana chikamu chakakosha chezano redu kubatsira vagari vemunharaunda kuti vapore uye vabudirire. ”